अमेरिकी अर्बपतिको प्रस्ताव : तानाशाहीविरुद्ध लड्नेलाई म १ अरब पैसा दिन्छु ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अमेरिकी अर्बपतिको प्रस्ताव : तानाशाहीविरुद्ध लड्नेलाई म १ अरब पैसा दिन्छु !
माघ १० गते, २०७६ - १२:०४
काठमाडौं । स्वीजरल्याण्डको डाबोसमा चलिरहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा एक अमेरिकी अर्बपतिले अनौठो प्रस्ताव राखेका छन् । उनले विश्वमा तानाशाही शासकहरुको कारण मानवता हराउँदै गएको भन्दै तानाशाही शासकविरुद्ध लड्न आफुँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहेको बताएका हुन् ।
अमेरिकाका समाजसेवीसमेत भनेर चिनिने अर्बपति जोर्ज सोरोसले विश्व तानाशाही व्यवस्थासँग लड्न १ अरब अमेरिकी डलर सहयोग गर्न चाहेको बताएका हुन् ।
विश्वमै तानाशाहीको राज भयो
सोरोसले बिहिबार वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै तानाशाही व्यवस्थाको कारण विश्व नै खतरामा पर्दै गईरहेको र मानवता नरहने अवस्थामा पुगेको बताए ।
फोरोमलाई सम्बोधन गर्दै सोरोसले भने, “सिभिल सोसाइटी लगातार कमजोर बन्दै गईरहेको छ । मानवता कम हुँदै गईरहेको छ । यस्तो लागिरहेको छ कि अब आउने केहि वर्षहरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चीनका का राष्ट्रपति शी जिनपिंगका भाग्यले नै दुनियाको दिशा तय गर्नेछ । भ्यादिमीर पुटिन, ट्रम्प र जिनपिंग तानाशाह जस्ता शासक छन् । सत्तामाथि पकड बनाउन उनीहरुले शासन शैली त्यस्तै बनाउँदै लगेका छन् ।”
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सोरोसले छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि हिन्दु राष्ट्रको तानाशाह बन्न खोजेको बताएका थिए । उनले मुश्लिम जनसमुदायमाथि ज्यादती गर्दै हिन्दुहरुको भोटको आधारमा सत्तामा रहने दाउ साँधेको बताएका थिए । सोरोसले मोदीको कदमले भारतमा करोडौं हिन्दुहरु संकटमा पर्दै गएको पनि उल्लेख गरेका थिए ।
उनले तानाशाही शासकहरुको विकल्प खोज्न नसकिए विश्व नरहने चेतावनी दिए । विश्व समुदायलाई सम्बोधन गर्दै शोरोसले भने, “अहिले खुला समाजको अवधारणा खतरामा पर्दै गएको छ । यसको अर्को चुनौतीको रुपमा जलवायु परिवर्तन देखा परेको छ ।
मेरो जिन्दगी मुख्य अभियान ओपन सोसाईटी नेटवर्क बनाउनु नै हो । यो यस्तो प्लेटफर्म बन्नेछ, जसमा दुनियाका सबै युनिभर्सिटीका मानिसहरु पढ्न र शोध गर्न सक्नेछन् । जसको लागि मैंले एक अरब डलर सहयोग गर्नेछु ।” एजेन्सीकाे सहयाेगमा
माघ १० गते, २०७६ - १२:०४ मा प्रकाशित